बदलौँ यो तानाशाही परम्परा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बदलौँ यो तानाशाही परम्परा
२०७० चैत्र २८, शुक्रबार ०३:०६ गते
कति पाठकहरुले पढ्लान् यो लेख ? कतिले पढेर मनमा राख्लान् ? कति दिनपछि बिर्सलान् ? कतिले व्यवहारमा उतार्लान् ? यी सबै परिणामहरु हुन् । परिणामको चिन्ता गरिएमा कुनै काम गर्न सकिन्न । त्यसैले, कर्मयोगीहरु काम गर्दछन्, परिणामको चिन्ता गर्दैनन् । दीर्घकालदेखि मनमा लागेको कुरा लेखिरहेको छु । आफूलाई नै सम्झाउन हम्मेहम्मे पर्दछ । तर, अरुलाई सम्झाउने उद्योगमा समय लगानी गर्न अल्छी गर्दिनँ, आखिर प्राध्यापक जो परियो । जसरी भए पनि आफ्नो कुरा राख्ने बाटो खोजिँदोरहेछ । आफूले दिएको सही सल्लाह कसैले मानिदिएमा अलि बेग्लै खालको मनोवैज्ञानिक तुष्टि हुनेरहेछ । हामी यो युगमा आएर पनि विज्ञानले यत्रो चमत्कार गर्दा पनि ढुंगेयुगकै व्यवहार गरिरहेछौँ । केही यस्ता परम्परा छन्, जसलाई हामीले मलामीले लाश र दीर्घरोगीले सास बोकेझैँ बोकिरहेछौँ ।
अस्ति भर्खर कलेजमा एक जना सहकर्मी मित्रको अनुहारमा पूरै लोडसेडिङ देखेँ । मित्र मलाई प्रायः मनको बह सुनाउँछन् । भने– हे गजलकार महोदय, घटीमा १५ पेटी चाहिन्छ मलाई । किनकि, हुर्किएको छोरालाई भनेजस्ती केटी र त्यो अनुष्ठान सम्पन्न गर्न १५ पेटी, अब यसैमा रदिफ र काफिया मिलाएर गजल कोर्नुहोस् । वैशाख महिनाभित्र तपाईंको यो भाग्यमानी मित्र विचित्र चित्र कोरेर उम्किने छ । एउटै छोरा हो, इज्जत राख्नैप¥यो । उनको अनुहारमा देखिएको पीडाका रेखाहरुले मलाई सोच्न बाध्य बनायो । होइन, यो विवाह अभिभावकको हो कि सन्तानको हो ? मनमनै भाइ प्रेम रिमाललाई सम्झिएँ । धेरै कुराहरु मनमा आए, गए । मैले भनेर के हुन्छ र ? यस्तो पलायनवादी सोच पनि आयो । जीवनमा पटकपटक गरिने होइन बिहे, एक पटक खर्च गर्दैमा जोगी भइन्छ र ? मरिलानु के छ र ? यसरी सोच्ने पनि छन् ।
फलानो त क्या कृपण (लोभी) रहेछ, छोराको बिहेमा पनि शाकाहारी भोज दियो । टन्न माछामासु खान पाइएला भनेर अघिल्लो दिनबाटै व्रत बसेको कामै लागेन । यति स्तरीय ठट्टाहरु पनि कानसम्म आइपुग्छन् । के यो तानाशाही परम्परा बोकिरहनुपर्दछ ? परिवर्तनको नाममा मौसम र सरकार मात्रै परिवर्तन भएर समाज अगाडि बढ्छ ? हरेक परम्परा एउटा कुरुप बोझझैँ लाग्दछ मलाई । १३ दिने संस्कारमा कुनै वैज्ञानिकता छैन । हामीले मान्ने चाडहरु पनि धेरैधेरै जटिल, फजुलखर्ची र उपयोगहीन छन् । बिदामाथि बिदा, ३६५ दिनमा घटीमा ३५० दिन काम गरेर मुलुक बनाउनु पर्ने हो । हामी बिदामाथि बिदा थपेर आनन्दित छौँ । एक वर्षमा हामी कति दिन काम गर्दछौँ ? सायद, संसारमै नेपालमा जति बिदा अन्त छैन होला । त्यसमाथि, हरेक ठाउँमा अनेक नाउँमा, अनावश्यक मानिसहरु भर्ना गरिएका छन् । यस्तो लाग्छ, हामी अझै पनि काशीलाई गन्तव्य बनाएर कुतीको टिकट काटिरहेछौँ ।
आदरणीय पाठक महाशय, लाखौँ रूपियाँ विवाहमा खर्च गर्नुको सट्टा सक्नेले नयाँ दुलाहा र दुलहीको नाममा दुई–चार जना गरिबका सन्तानलाई पढाइदिन हुन्न ? राम्रो काम गरेर समाजमा उदाहरण बन्न हुन्न ? एक लाख पनि खर्च गर्न नपर्ने ठाउँमा हामी बिसौँ लाख रूपियाँ खरानी बनाउँछौँ । एक साल होइन, दुई साल होइन, हरेक साल यो कुरुप र तानाशाही परम्परा दोहोरिरहेको छ । मान्छे, जानीजानी, जीवनभरि नै मूर्ख बन्न विवश छ । अभिभावकहरु जो अलि मध्यमस्तरका छन्, जसले १०औँ लाख खर्च गर्न साहू खोज्नैपर्दछ । वित्तीय संस्थाको शरणमा पुग्नैपर्छ भोलि, उस्तै परे यही कारणले सुकुमबासी बन्न पुग्दछन् । मनमनै सन्तानलाई बोझ ठान्न विवश हुन्छन् । जब हामी सबैलाई यो परम्परा ठीक होइन भन्ने लागिरहेछ भने किन यसलाई मसानघाट पु¥याउन सकिन्न ? यसरी पनि रहन्छ इज्जत ? के हो इज्जत ? भित्रभित्र तनावग्रस्त जीवन ज्यूँन विवश गराउने इज्जत पनि कुनै इज्जत हो ? साहूको फोनको घन्टी लगातार आउनु कुनै सुखद समाचार हो ? बैंकलाई ब्याज तिरिरहन विवश हुनु आनन्द हो ?
सायद, मेरो मन नै जोगी भएर होला, जीवनमा लक्ष्मीपति बन्नुछैन होला । मलाई ठूलो–ठूलो कारोबारतिर कहिल्यै मन गएन र ब्याज तिर्न नपर्ने जिन्दगी नै सबैभन्दा सुखी जिन्दगी ठानेँ मैले । सायद, म अप्रगतिशील पात्र हुँ । यो तानाशाही परम्परालाई अस्ति भर्खर एउटा १२ वर्षको बच्चाले शानदार च्यालेन्ज दिएछ । नाम उल्लेख नगरौँ । कलिलो उमेरमै हरेक कुरालाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत बनाएको उक्त बालक चूडाकर्म सम्पन्न गर्न विदेशबाट नेपाल ल्याइयो । उसको अंकलले बाटोमा धेरै कुरा सम्झायो । ऊ बहस गर्दै आयो । अरु कुरामा त ऊ त्यति बागी भएन, तर कपाल खौरिने भनेपछि उसको मन रमाएन । भोलि विदेश फर्किनुछ । स्कुल जानुछ । साथीहरुले के भन्लान् ? सायद जहाँ ऊ बढ्यो र पढ्यो, त्यो ठाउँमा उसका दमालीहरुले कपाल खौरन्नन् होला । काकाले अनुनय–विनय गर्दै भन्यो– भतिजा, यो हाम्रो परम्परा हो । हामीले यो गर्नैपर्दछ । यसो गर्दैमा नराम्रो के हुन्छ ?
अरे अंकल, मेरो कपाल खौरिएर मलाई जोकरजस्तो बनाउँदा राम्रोचाहिँ के हुन्छ ? यस्तो बेकारको परम्परा बदल्नुपर्दैन ? तपाईंहरुले सक्नुभएन । आखिर कोही न कोही मान्छे त भोलि पक्कै जन्मिने छ, यस्तो तानाशाही परम्परा बदल्न । त्यो मान्छे म बन्न हुन्न र ? म त कुनै मूल्यमा पनि मेरो यति राम्रो कपाल खौरिन्न । भतिजासित काकाले हार खाएछ । तर, बालकलाई उसको विद्रोही माग फिर्ता लिन विवश बनाइयो । उसले भोलि कस्तो संस्मरण लेख्ला ? मैले त्यो बालकलाई मनमनै स्यालूट गरेँ । र, सम्झिएँ आफैँलाई । वर्षदिनमा दुई दिन म पनि कपाल खौरिन विवश हुन्छु । अवैज्ञानिक र तानाशाही इष्टमित्रहरु एकछाकी को दिन कपाल खौरिन पर्दछ भन्दछन् । म ५ गते एकछाकी छ भने ४ गते नै कपाल खौरिन्छु, त्यो मेरो भद्र अवज्ञा हो । पुरेतलाई थोरै संकेत गरेर दुई घन्टा लाग्ने कर्मकाण्डी सरात् आधा घन्टामै चइट ! जब–जब बा र आमाको तिथि नजिक आउँछ, मेरा महिला आफन्तहरु आतङ्कित हुन्छन् । गृह–सन्तुलनका लागि यसो सेतो धोती फेरिदिन्छु र ६ डोरा धागो भिर्छु । आफूलाई विश्वास नलागेको काम गर्नुपर्दा कति मनोवैज्ञानिक कष्ट हुन्छ । त्यो मैले भोगेको छु । १२ वर्षे त्यो वैज्ञानिक र उत्तरआधुनिक किशोरले त्यो दिन परम्परावादी आफन्तहरुलाई मनमनै के भन्यो होला ? यसको उत्तर म त्यो समयनायकसित मुहार पुस्तिकामार्फत सोध्ने छु । ऊ मेरो फेसबुक साथी हो ।
राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै समाजमा खासै केही अन्तर पार्दैन । जयनेपाल र लालसलाम भन्नेहरुका बीचमा कटफट भइरहन्छ, त्यति हो । यथार्थमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि सांस्कृतिक रुपान्तरण हुनैपर्दछ । स्वस्थानी र गरूडपुराणकै युगमा छौँ हामी । नारायणहिटीका नरेशलाई मर्यादित बहिर्गमन गरे पनि हामीले हृदयको नरेशलाई अझै हर्लिक्स, च्यावनप्रास बोर्नभिटा आदि खुवाइरहेछौँ । आज हरेक नेता आफूलाई विशिष्ट मानव ठान्दछ । दास प्रथा ज्यूँदै छ । हामी तथाकथित विद्वान्हरु नै पुच्छरले हात्ती हल्लाएको हेर्न पाउँदा मख्ख छौँ । हरेक ठाउँमा गलत परम्परा हुर्किरहेछ । गरिबको लागि खाना, नाना र छाना अझै पनि एकादेशको कथा भएको छ । हुँदै नभएको एउटा भगवान्लाई कैदी बनाउन करोडौँको मन्दिर बनाइन्छ । आयव्यय कति–कति, यदि ठीकसित अनुसन्धान गर्ने हो भने आज यो संसारमा केही व्यक्तिको मुठीमा जति धन छ, त्यसको एक तिहाई धनले संसारको गरिबी निवारण हुनेछ । यतातिर कसले ध्यान दिने ? गरिबलाई गरिबै रहन नदिए धनी हुनुको मज्जा पनि नहुने हो कि ? फेरि गरिबको नाममा राजनीति गर्नेहरु बेरोजगार हुने हुन् कि ? केही बुझ्न सक्दिनँ । यौटा जिन्दगीमा केही बुझ्न सकिन्न । अर्को जिन्दगी पाइन्न । फेरि यो धरतीमा आइन्न । जे भए पनि राम्रो अनुहारमा प्रस्ट देखिने डन्डीफोरझैँ यी कुरुप र तानाशाही परम्परालाई आर्यघाट पु¥याउन पाए यही एउटा जीवन सार्थक हुन्थ्यो कि ?